I-China Direct Steam Retort mveliso kunye nabenzi | Dingtaisheng
Ukulungele ukutya ukutya, isidudu
Imigaqo ye-FDA kunye ne-China yenze imigaqo eneenkcukacha kuyilo kunye nokusebenza kwe-retort retort, ke nangona ingagungqiyo ekusebenziseni amandla, isathandwa ngokubanzi ngabathengi abaninzi ngenxa yesicelo sayo ngokubanzi kwiindawo ezininzi ezindala. Kwisiseko sokuqinisekisa ukuthotyelwa kweemfuno ze-FDA kunye ne-USDA, i-DTS yenze ulungelelwaniso oluninzi ngokwe-automation kunye nokonga umbane.
Unikezelo lobushushu olufanayo:
Thobela isiqinisekiso se-FDA / USDA:
Ilula kwaye ithembekile:
Ekuqaleni, umphunga utofelwa kwisitya se-retort ngokusebenzisa imibhobho yokusasaza umphunga, kunye nokuphuma komoya ngezivalo zomoya. Xa zombini ixesha kunye nobushushu bemiqathango esekwe kwinkqubo kuhlangatyezwana ngaxeshanye, inkqubo phambili ukuza-up-phase.In kuyo yonke ukuza-up kunye nesigaba inzala, retort isitya igcwele ngomphunga ezihluthisiweyo ngaphandle umoya intsalela xa kukho ubushushu olungalinganiyo ukuhanjiswa kunye nokungabikho ngokwaneleyo kwenzalo. Ii-bleeders kufuneka zivulekele umoya wonke, zize, upheke inyathelo ukuze umphunga wenze i-convection ukuqinisekisa ubushushu obufanayo.
Iziselo (iprotein yemifuno, iti, ikofu): itoti
Imifuno kunye neziqhamo (amakhowa, imifuno, iimbotyi): itoti
Inyama, iinkukhu: itoti inako
Intlanzi, ukutya kwaselwandle: inkonkxa
Ukutya kwabantwana: itoti inako
Ukulungele ukutya ukutya, isidudu: inkonkxa
Ukutya kwezilwanyana zasekhaya: itoti
Egqithileyo Ukuntywila emanzini
Okulandelayo: Umphunga kunye nokuPhendula kwakhona ngoMoya
Ngokuzenzekelayo I-Batch ye-Horizontal Retort
Umatshini wokuPhendulwa kweSitimu